စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအင်္ဂလိပ် | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -toeictw.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအင်္ဂလိပ် ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
အလုပ်ခွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာနိုင်ငံခြားသားများနှင့်အတူစကားလက်ဆုံများသောအားဖြင့်အင်္ဂလိပ်မှာကောင်းသောမဟုတ်သောဝန်ထမ်းများအတွက်အများဆုံးစိတ်ဖိစီးမှုအရာဖြစ်ပါသည်.ကောင်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစကားပြောဆိုမှုစွမ်းရည်ကိုသင်ပိုကောင်းအလုပ်အကိုင်အမြှင့်တင်ရေးနှင့်လစာတိုးအခွင့်အလမ်းများရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြု,သငျသညျအလုပျနဲ့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဘို့လည်းလွယ်ကူစေသည်.ဆက်သွယ်ရေးဘို့လိုအပ်ကြောင်း.တိုတိုမှတဆင့်-သက်တမ်းနှင့်အထူးကြပ်မတ်လေ့ကျင့်ရေး,လည်စည်း’သင်တန်းစကားပြော s ကိုသင်လေ့ကျင့်ရေးအပြီးတွင်အသစ်တစ်ခုကိုကြည့်ငါပေးမည်.နားထောင်နေသည်,ပြောရမယ်ဆိုရင်,အင်္ဂလိပ်သင်တန်းအားလုံးရှုထောင့်မှာရှိတဲ့စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်း,ကုမ္ပဏီ'နိုင်ငံခြားဖောက်သည်သင်တို့အပေါ်မှာအားကိုး့!